Diiwaangaliska dadweeynaha mecnaheed waa in laga diiwan galiyo Hey'adda canshuuraha oo laguugu tirriyo qof degan degmo ka mid ah Iswiidhan. Dadka la diiwangaliyo oo dhan waxaa la siiyaa toban-lambar. Waajibaadyo iyo xuquuq badan oo leedahay waxey ku xiranyihin inaad diiwangashantahay iyo halka aad ka diiwaangashantahay. Waxeey ahaan karaan xaq u lahaanshaha lacagta kaalmada carruurta iyo kaalmada kirada guriga, halka aad cashuurta ka bixineysid iyo meesha aad ka codeyneysid. Degmo kasta ayadaa qorsheysata howlaheeda iyadoo eegeysa tirada dadka degan meesha. haddii aad bedelatid ciwaan guri waa inaad u sheegtaa Hey'adda laant asocdaalka hal isbuuc markaad guurtid kaddib.
Warbixin ku saabsan diiwaangaliska dadweeynaha ka akhriso bogga internetka ee Hey'adda cashuuraha: www.skatteverket.se/folkbokforing
Masawirqaade: Hey'adda canshuuraha
Cadeeymada aqoonsiyeed ayaa la ansax aya